ClearSlide: Madal Soo Bandhigid Ku Saabsan Awooda Iibinta | Martech Zone
ClearSlide: Madal Soo Bandhigid ah Ku Meel Gaarka Iibka
Jimce, Maarso 27, 2015 Douglas Karr
Sida lagu sheegay cilmi baaris ay sameeyeen Forrester, 62 boqolkiiba hogaamiyaasha iibka ayaa raba aragti badan oo ku saabsan dhaqdhaqaaqa iibka, laakiin laakiin boqolkiiba 6 kaliya ayaa kalsooni ku qaba inay helaan aragtiyo sax ah. Sidaa awgeed, hoggaamiyeyaasha iibku waxay la halgamayaan inay fahmaan wixii ku soo noqnoqda, kooxaha, iyo waxyaabaha ku jira run ahaantii wax ku ool u ah wareegga iibka - ugu yaraan illaa fursadaha lagu guuleysto ama lumo.
ClearSlide, madal soo bandhigid oo karti u leh iibinta, ayaa la sii daayay Engagement iyo Raac, Tilmaamo cusub oo ka caawiya hogaamiyaasha iibka inay la socdaan, falanqeeyaan, kuna dhaqmaan xogta waxqabadka iibka.
Hogaamiyaasha iibka ayaa adeegsada ClearSlide Kaqeybgal iyo Raac si loola socdo meelaha iibka muhiimka ah:
Hawlaha Iibka - Maareynta iibka waa la ogeysiin karaa markay reps-ku yeeshaan shirarka iibka iyo markay diraan emaylka macaamiisha, iyadoo la fiirinayo waxyaabaha la daboolay. Tani waxay gacan ka geysan kartaa tababarkooda maareeyayaasha iyo dib-u-celinta waxayna kaa caawin kartaa aqoonsiga waxa shaqeynaya iyo halka ay jid-gooyooyinka u yihiin inay horay ugu socdaan ganacsiga.
Ka qayb qaadashada iibsadaha - Maareynta iibku way arki kartaa sida kootooyinka ay uga jawaabaan waxyaabaha ku jira. Markay raacaan xisaabaadka, waxay helayaan ogeysiisyo deg deg ah marka waxyaabaha la furayo iyo inta waqti ee macaamiisha ku qaataan ka qeyb qaadashada. Kulamada khadka tooska ah, ClearSlide waxay xisaabisaa sida mashquulsan ama u mashquuliyay kaqeybgale kasta oo joogaa heer isjiid jiid ah. Xogtaan waxaa kadib la ururin doonaa qiimeyn guud ee kaqeybgalka macaamiisha, taas oo lagu jaangooyn karo fursadaha kale ee dadka wax iibiya ay shaqeynayaan.
Content - Maareynta iibku waxay arki kartaa iibka iyo waxyaabaha suuqgeyntu kuxirantahay heerarka ugu sareeya ee hawlgelinta. Waxay ku amri karaan wakiilada iibka inay isticmaalaan waxyaabaha ugu fiican isla markaana ay la jaanqaadaan suuqgeynta si loo hagaajiyo farriinta.
Kaqeybgalka iyo Raacida ayaa ka caawin doonta hogaamiyaasha iibka inay gaaraan horumar joogto ah dhammaan ururkooda. Waxaan u qaabeynay qalabkan si aan u siino hogaamiyaasha iibka muuqaalka ay u baahan yihiin si ay u horumariyaan istaraatiijiyada iibka ee ku saleysan xogta adag. Isticmaalka Kaqeybgalka iyo Raacida, ururada iibka waxay awood u yeelan doonaan inay sida ugu fiican uga faa'iideystaan ​​waqtigooda iyo waqtiga macaamiishooda. Raj Gossain, VP of Product, Clearslide.
Barxadda 'ClearSlide' waxay siisaa hoggaamiyeyaasha iibka aragti ku saabsan waxqabadka waqtiga-dhabta ah ee kooxahooda waxayna siisaa qoto dheer Analytics ku saabsan noocyada waxyaabaha ugu dambayn saamaynta ugu badan ku leh macaamiisha. Xirfadleyda iibka, ClearSlide waxay u oggolaaneysaa isgaarsiin fudud macaamiisha iyo rajooyinka, ha noqoto khadka tooska ah ama shaqsi ahaan, iyadoo la adeegsanayo barnaamijyada ku saleysan webka ama moobiilka ClearSlide.
Tags: cadcadhawlgelintaraacmadal bandhighawlgelinta iibkahogaaminta iibkamaaraynta iibka
Maxay yihiin Waxyaabaha ugu Fiican Barnaamijyada Tartanka Facebook?
Lyris Waxay Bilaabaysaa Shakhsiyeynta Mawduuca Iswada